Uru nke Nintendo mbak na-eto 86% na 8 ụbọchị | Akụkọ akụrụngwa
N'ime ụbọchị 8 uru nke Nintendo mbak mụbara site na 86%
Anyị ka na-eso na-anwa iji dabara ihe niile duru na egwuregwu Nintendo vidiyo a na - akpọ Pokémon GO nke ghọrọ ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. O sitere na ulo oru Japanese a nke jisiri ike tinye n'oge ụfọdụ n'ime iri afọ ole na ole gara aga ụzọ anyị ga-esi jiri obi ụtọ egwuregwu vidiyo ndị a nwee obi ụtọ. Ugbu a, o meela ya ọzọ site na eziokwu.
Ihe na-atọ ọchị bụ na, mgbe anyị hụrụla ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amaba n'ime ọdọ mmiri nde dollar etinye N'eziokwu, eziokwu dịwanye elu ewerewo ezigbo ihe ịhapụ ndị chere na mebere ga-achịkwa ụwa ka na-agba gburugburu. Dị mfe: ọnụ ahịa ahịa nke mbak Nintendo toro na 8 ụbọchị site na 86 percent.
Bụrụ na ọ nwere ike, Nintendo na-achọta onwe ya ahịa uru yiri nke Adị m afọ 6 gara aga na ihe niile yiri ka ọ na-aga n'ihu na-abawanye na uru, ebe anyị na-amalite ịmara na a na-ebido egwuregwu ahụ n'ụwa niile. Nke a ga - apụta nzuzu karịa na mgbasawanye nke egwuregwu vidio nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahụ ọkụ n’onwe ya.
Otu ụlọ ọrụ ndị Japan nke eresị ha ugbu a otu na $ 263 na na dị ka ọtụtụ ndị nyocha nwere ike irite 2 nde dollar na 14 izu. Onu ogugu nke na eme ka mmekorita nke ndi mmadu di na ihe enwere ike itukwasi ya ma jiri anya ya hu ya, mana nkea achotaghi ebe eziokwu di egwu na Pokémon GO ga aga.
Ugbu a gịnị anyị nwere ya na Spen na mgbasawanye zuru ụwa ọnụ bụ eziokwu, ọ ga-adị mkpa ịhụ ma ọ bụrụ na Nintendo gara n'ihu na-abawanye uru nke mbak gị ọ naghị adịgide naanị n'izu ndị a nke ezigbo ara. Ihe doro anya bụ na ụlọ ọrụ ndị Japan a nwere ike iju anyị anya dịka ọ mere na afọ ndị a niile, site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » N'ime ụbọchị 8 uru nke Nintendo mbak mụbara site na 86%
David Rojas Granados dijo
Niantic gwara INGRESS ihe ọ nwere ike! Nintendo ama ihe ma were uru nke a wee mee nnukwu nzọ na echere m na ekwesịrị ịkọwa ya dịka azụmaahịa azụmaahịa bara uru ịkụzi na Digital Master.
Zaghachi David Rojas Granados
Leaked ngosi nke PlayStation 4 NEO
Ha choputara ohuru ohuru na mbara igwe